Gudiga kenya uxilsaartay weerarkii ceel cadde edeeyay ciidanka somalia | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Gudiga kenya uxilsaartay weerarkii ceel cadde edeeyay ciidanka somalia
Guddiga dalkani Kenya u xilsaartay iney baaraan weerarkii Ceel-cadde ayaa sheegay in ciidanka dowlada somalia ee ku sugnaa xerada Ceel-cadde ay ka baxeen xeradan saacado ka hor weerarkii xoogaga Al-shabaab ku qaadeen halkaasi.
Saraakiisha guddigan ayaa baaraya sababaha ay Ciiddanka Somalia uga baxeen Xeradda Ceel-cadde dhowr saacadood ka hor weerarkii ay xoogaga Alshabaab bishan 15-dii ku qaadeen Xeradaasi kaasoo dhaliyay qasaaro isugu jra dhimasho iyo dhaawac.
Guddigu waxay tilmaameen inay Saraakiisha Ciiddanka Somalia ka baxeen Qeybtii ay ka degganayeen Xeradaasi, iyagoo aan ku soo wargelinin Ciiddanka dalkani Kenya arrintaasi.
Guddiga Baarayaasha dalkani Kenya ee Weerarkii Ceel-cadde waxay kaloo baarayaan sababaha dhaliyey inay Isgaarsiinta Ciiddanka dalkani Kenya ee ku sugnaa Xeradda Ceel-cadde noqdaan kuwo mashquul ah, ka hor Weerarkii Alshababaab ee ceel cadde.
Ilo ku dhowdhow Waaxda Difaaca dalkani Kenya ayaa sheegay inay Baarayaasha isku hawlayaan sidii lagu ogaan lahaa Isgaarsiintii ugu dambeysay ee dhex marta Taliyayaasha Ciiddanka dalkani Kenya iyo kuwa Soomaalida ee ku wada sugnaa Ceel-cadde, ka hor weerarkaas.
Guddiga Baarayaasha dalknai Kenya ee Weerarkii Ceel-cadde waxay kaloo isweydiiyeen Tallaabadda ay Dowladda Somalia ka qaaday Taliyayaashii Ciiddanka Somalia ee maamulayey Xerada Ceel-cadde, markii uu Weerarkii xoogaga Alshabaab dhacayey.
Guddigan waxay kaloo farta ku godeen Xildhibaano Somali ah oo ay ku eedeeyeen inay Askarta dalkani Kenya ku tilmaamaan Askar Duulaan ku qabsatay Somalia oo kale.
Horey waxay Guddiga Baarayaasha dalkani Kenya ugu eedeeyeen mid ka mid ah Beelaha Soomaalida deggan Nawaaxiga Ceel-cadde ee Gobalka Gedo inay kaalin ka qaateen qorshihii iyo weerarkii ay xarakada Alshabaab bishan 15-dii ku soo qaadeen Xeraddii ay Askarta dalkani Kenya ee qaybta ka ah hawlgalka amisom kaga sugnaayeen Ceel-cadde.